India inogona kufamba ichironga Bitcoin sekirasi yeasset - Cazoo
musha » musha » India inogona kufamba ichironga Bitcoin sekirasi yeasset
Tag: Bitcoin asset kirasi, Bitcoin asset kirasi, El Salvador mari yemadhora, India cryptocurrencies
India, iyo pakutanga yakaratidza kuvengana kwakanyanya nema cryptocurrencies, ikozvino yatumira komiti inotarisirwa kuendesa gwaro renyunyuto kudare remakurukota munguva pfupi iri kutevera.
Mushure mekufamba kwenhoroondo kweEl Salvador kunotora Bitcoin semari yefiat (ichiita mari izere - muenzaniso unopenga!), kunyangwe muIndia cryptocurrency vanofarira vanogona kufema kugomera kwekusununguka.
Zvinokosha masosi anotevera indasitiri akataura nemuparidzi Indian Express kuti hurumende yaenda kubva pane yaimbovenga ruvengo kuenda kune chaiyo mari uye zvakawanda ingango ronga Bitcoin sekirasi yeasset munguva pfupi muIndia.
Mutongi wemusika Securities uye Exchange Bhodhi reIndia (SEBI) ichatarisira mirau yeiyo cryptocurrency indasitiri mushure meBitcoin yakarongedzwa sekirasi yeasset. Indasitiri yeIndia cryptocurrency iri zvakare muhurukuro nebazi rezvemari maererano nekuumbwa kweseti nyowani yemitemo, uye masisitimu eindasitiri anoratidza kuti boka revanoona nezvehushumiri vari kudzidza nyaya iyi Iyo yekunyora cryptocurrency mutemo ungangozounzwa muParamende.
Iko kusimudzira kunouya mazuva mushure meReserve Bank yeIndia (RBI) mune yakatenderera yakaraira mabhanga ku rega kunzvenga mashandisirwo anosanganisira chaiwo ma tokeni ichitora denderedzwa rayo rapfuura kubva ku2018, sezvo yaive yakundwa neDare Repamusorosoro. Gavhuna weRBI Shakthikanta Das, zvakadaro, akadzokorora kusahadzika kwake.
"Tinogona kutaura zvechokwadi kuti komiti nyowani iri kushanda pamari yemadhora ine tarisiro huru pamusoro pemutemo nemitemo yemakambani emari… Chinyorwa chitsva chichave munguva pfupi iri mudare remakurukota, rinozoongorora mamiriro ese uye kutora danho rakanakisa kumberi. Isu tine chivimbo chakasimba kuti hurumende ichagamuchira macryptocurrencies uye blockchain matekinoroji". Mashoko kubva kuna Ketan Surana, mukuru wezvemari uye mukuru mukuru, Coinsbit, uye nhengo, Internet neMobile Association yeIndia.
Pepepepa na Indiatech inoratidza kuti kugamuchirwa kweIndia kweBitcoin senge imwe kirasi yeaseti inguva yemberi chaiyo. Nekuda kwe hunhu hunogadzikana yemadhijitari emari (mitengo inochinja-chinja zuva nezuva) - gwaro iri rinonyora - zvakaoma kuzvishandisa sechiridzwa chekubhadhara. Gwaro iri zvakare rakakurudzira kubhadharisa mutero wecryptocurrency, zvichivaita kuti vazviise pasi pemutero wekuwana mari pasi pemutemo weIncome Tax.
Hitesh Malviya, nyanzvi pa blockchain uye mari ye crypto, akati: "Mukuona kwangu, hurumende yeIndia ichaongorora nzira yekugadzirisa Bitcoin. Ini handifunge kuti India ichafunga kugamuchira Bitcoin semari fiat munguva pfupi iri kutevera, sezvo zvaizokanganisa chinzvimbo cheiyo Indian rupee zvakanyanya. Kutambira Bitcoin semari yemabonds ipfungwa yakanaka kune nyika idzo dzisina mari yadzo kana dzinovimba nedhora reUS ”.
Binance muIndia: Hurumende yeIndia yaizofunga nezvemutemo wedhijitari panzvimbo pekurambidzwa
Binance muAfrica: Yakanyorwa kuwedzera muhuwandu hwevashandisi vemuAfrica
Elon Musk kuSNL inotaura nezve Dogecoin, uye doge inodonha (8 Chivabvu 2021)